Premier League oo Man City iyo Liverpool u kala geynaya Labo Koob iyo Bilado….(Sidee!!!??) – Gool FM
Premier League oo Man City iyo Liverpool u kala geynaya Labo Koob iyo Bilado….(Sidee!!!??)
Byare April 27, 2019
(England) 27 Abriil 2019. llo wareedyo uu helay hilinka caanka ah ee ESPN ayaa lagu sheegay in Premier League uu wado qorshe uu labo koob iyo bilado uu kala geyn doono garoomada ay ku ciyaarayaan Man City iyo Liverpool kulanka ugu dambeeya haddii uu tartankooda isla gaaro ciyaarta u dambeysa ee xilli ciyaareedka.
Liverpool ayaa xalay soo adkaatay iyadoona iminka hogaanka ku heysa 2-dhibcood, haddii ay City soo adkaato Axada iyada ayaa misane dhibic ku qaban doonto hogaanka oo tartanka laguma kala bixi doono ilaa dheesha u dambeysa sida muuqata.
Haddii ay sidaa dhacdo oo labada kooxood qoorta iskula sii jiraan ilaa ciyaarta u dambeysa ee xilli ciyaareedkan, Premier League ayaa hir galin doona qorshe labo koob iyo bilado lagu kala geynayo labada garoon ay kulanka u dambeeya ku kala ciyaarayaan Reds iyo City.
Maadaama masaafo dhan 270 mile u jirto labada garoon ay ku kala ciyaari doonaan kooxaha hogaanka ku dagaalamaya waxaa meesha ka baxay suuro galnimada in Koobka lagu soo qaado diyaaradaha Qumaatiga u kaca ee Helicopter sida ay ilo wareedka ku heshay ESPN.
Sidaa darteed, labada garoon ayaa waxaa la kala geyn doonaa labo koob iyo bilado, si la mid ah xilli ciyaareedkii 2011-12, markaa oo uu tartanka Premier League kulanka ugu dambeeya isla gaareen kooxaha Manchester City iyo Manchester United.
Labada koox ee ka wada dhisan Manchester ayaa iyagoo isku dhibco ah ciyaarta u dambeysa xilli ciyaareedkaa la kala yeeshay QPR iyo Sunderland, inkastoo ay wada adkaadeen misane farqiga goolasha waxaa koobka ku qaaday kooxda uu iminka hogaamiyo Pep Guardiola.
Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii ay Liverpool xalay guusha ka gaartay Kooxda Huddersfield Town